Imithetho kaKirchoff: imithetho eyisisekelo yama-node kagesi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Imithetho kaKirchhoff: imithetho eyisisekelo yama-node kumasekethe kagesi
njenge Umthetho ka-Ohm, the Imithetho kaKirchhoff Yenye yemithetho eyisisekelo ye-elekthronikhi. Le mithetho isivumela ukuthi sihlaziye amandla we-voltage namandla wamanje ku-node, okuthile okubalulekile ukwazi izici zamasekethe.
Ngakho-ke uma ufuna wazi okuncane ngabo, Ngiyakumema ukuthi uqhubeke nokufunda konke lokhu kufundisa kuma-equations ayisisekelo kanye nokusebenza kwawo kumasekethe ayisisekelo ...
1 I-Node, igatsha, i-mesh
2 Imithetho kaKirchhoff
2.1 Umthetho wokuqala noma ama-node
2.2 Umthetho wesibili noma ama-meshes
I-Node, igatsha, i-mesh
Uma uhlaziya isekethe ungakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezimpawu ezahlukahlukene zezinto, imigqa yokuxhuma, ukuxhumana, futhi izindawo. Lezi zokugcina zibizwa nangokuthi igatsha noma i-mesh.
Imithetho kaKirchhoff isetshenziselwa ukuhlaziya i- izakhiwo zikagesi kulezi zindawo. Lokho wukuthi, ezindaweni ezihlangana lapho izinto ezimbili noma ngaphezulu zihlangene. Isibonelo, njengephuzu ongalibona esithombeni esikhulu salesi sihloko ...
I-Las Imithetho kaKirchhoff Kungukulingana noma ukulingana okubili okususelwa ezimisweni zokongiwa kwamandla nokushaja kwamasekethe kagesi. Yomibili le mithetho ingatholwa ngqo ngokuthola izibalo ezidumile zikaMaxwell, yize uKirchhoff esandulele lokhu.
Igama labo livela kumtholi wabo, ngoba bachazwa okokuqala ngo-1846 nguGustav Kirchhoff. Futhi njengamanje zisetshenziswa kabanzi kwezobunjiniyela kagesi nogesi ukwazi i-voltage neyamanje kuma-node wesifunda, futhi kanye noMthetho ka-Ohm, bakha amathuluzi asebenza kahle wokuhlaziya.
Umthetho wokuqala noma ama-node
«Kunoma iyiphi i-node, isamba se-algebraic yamandla afaka i-node silingana nesamba se-algebraic yamandla asishiya. Ngokulinganayo, isamba sayo yonke imisinga edlula kule node silingana no-zero.»
Mina = Mina1 + Mina2 + Mina3…
Umthetho wesibili noma ama-meshes
«Esifundeni esivaliwe, isamba sawo wonke amandla wehla ngokulingana silingana nenani lamandla ohlinzekiwe. Ngokulinganayo, isamba se-algebraic sokwehluka kwamandla okuba khona kugesi kusifunda silingana no-zero.".
-V1 +V2 +V3 = Mina R1 + Mina R2 + Mina R3 = Mina · (R1 + R2 + R3)
Manje usungaqala ukusebenzisa lokhu amafomula alula ukuthola imininingwane yamanje namandla kagesi kumasekethe akho ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » imfundo » Imithetho kaKirchhoff: imithetho eyisisekelo yama-node kumasekethe kagesi
Umhlahlandlela osheshayo: ikhodi yombala we-Resistor
I-OSMC: isikhungo se-multimedia se-Raspberry Pi yakho